ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်မှု့နှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရတတ်သော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ - intouchmedicare
Last updated: 29 Jun 2022 | 893 ကြည့်ရှုခြင်း |
ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးအားထိန်းကျောင်းရန် ကလေးထိန်း (nanny) အဖြစ် တစ်စုံတစ်ဦးအားရွေးချယ်ရန်အတွက် နောက်ခံစစ်ဆေးမှု့များဖြစ်သည့် ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေမှု့နှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။နေထိုင်မှု့ကိစ္စပင်ဖြစ်စေ၊ရိုးသားမှု့အကျင့်စာရိတ္တပင်ဖြစ်စေ၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (သို့) ကျန်းမာရေးအရပက်သက်မှု့နှင့်ဖြစ်စေ အဖေနှင့်အမေ (မိဘ) အများစုသည်ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ (Nanny Employment Checkup) အား အလုပ်မစမီ ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။သံသယရှိနေသောသူများ အတွက် မေးခွန်းနှင့်အဖြေများအားဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အချက်အလက်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဤဆောင်းပါး၌ စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
ကလေးထိန်းများမှ ဘယ်လိုရောဂါများက ကျွန်တော်တို့၏ကလေးငယ်များအားအလွယ်တကူ ကူးစက်စေနိုင်သလဲ?
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့အပြင် ကလေးထိန်းအလုပ်မစတင်မီ လုပ်ဆောင်ရန်အခြားလိုအပ်ချက်များရှိပါသလား?
ကျန်းးမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (Health checkup) ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအင်္ဂါများ၏လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များအား စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ/မရှိခြင်း (သို့) ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလားဟူ၍ ၄င်းတို့အား စောဦးစွာတွေ့ရှိပါက ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှု့အား လျင်မြန်စွာကုသနိုင်ခြင်း (သို့) လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ခြင်းအား အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် 1 ကြိမ် ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုထားပါသည်။
ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ (Nanny Employment Checkup) ဆိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအားစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကလေးထိန်း (nanny) အလုပ်လုပ်မည့်သူအားအလုပ်ခန့်မည့်သူမှ အလုပ်မစတင်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူရောဂါအမျိုးမျိုးအားစစ်ဆေးနိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ဥပမာ အရေပြားရောဂါများ၊ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာရောဂါများ (သို့) အသက်ရှု့လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကဲ့သို့သော ကလေးထိန်းသည် ကလေးများနှင့်ထိတွေ့မှု့ရှိမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် အလုပ်မစတင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေး များကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသူနှင့်အတူ ပါလာနိုင်သော ရောဂါများဘေးမှ ကင်းဝေးစေမည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဖေနှင့်အမေ(မိဘ)များအားစိတ်အေးချမ်းသာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးထိန်းဆိုသည်မှာ အဖေနှင့်အမေ (မိဘ) များပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးငယ်နှင့် နီးစပ်ထိတွေ့ရမည့်သူဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ပိုလို့တောင်များနေတတ်ပါသည်။ အကယ်၍ အဖေနှင့်အမေ (မိဘ) များ အပြင်အလုပ်ထွက်လုပ်နေသောအချိန်တွင် ကျွန်ပ်တို့ကလေးငယ်အားပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမည့် ဌားထားသော ကလေးထိန်းဆီမှ ရောဂါများကူးစက်စေမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေ့စဥ်ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ထိတွေ့ခြင်း (သို့) ချောင်းတိုးခြင်း၊နှာချေခြင်း အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအတူတွဲသုံးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ငယ်ရွယ်သောကလေးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာခုခံအားနည်းသောကြောင့် အလွယ်တကူရောဂါကူးစက်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။အလုပ်မစတင်မီ ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည်လိုအပ်သောကျင့်စဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
4. ကလေးထိန်းများမှ ဘယ်လိုရောဂါများက ကျွန်တော်တို့၏ကလေးငယ်များအားအလွယ်တကူ ကူး စက်စေနိုင်သလဲ?
ကလေးထိန်းမှ မိမိ ရင်သွေးငယ်အား ကူးစက်စေနိုင်သောရောဂါများသည် ဥပမာ အရေပြားရောဂါ၊အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊သန်း၊ကပ်ပါးပိုး (သံကောင်) ၊အသည်းရောင်ဘီပိုးရောဂါနှင့် အကယ်၍ အသက် 1 နှစ်အောက် အရွယ်ရှိသောကလေးငယ်များသည် တီဘီရောဂါ နှင့် HIV ရောဂါဝေဒနာရှင်များနှင့်အတူလိက်ပါလာသောရောဂါများအားသတိထားပါ။အချို့သော စင်တာများမှကလေးထိန်းတစ်ဦးအားဌားရမ်းလိုပါက ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းခံယူပြီးသူဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာစင်တာများမှာ ၄င်းစစ်ဆေးမှု့အစိတ်အပိုင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် ပေးဆောင်ရပါသည်။ထို့ကြောင့် အလုပ်မခန့်မီ အဖေနှင့်အမေ (မိဘ) များမှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားသေချာစွာမေးမြန်းသင့်ပါသည်။
5. ကလေးထိန်းများမှ ဘယ်လိုရောဂါများက ကျွန်တော်တို့၏ကလေးငယ်များအားအလွယ်တကူ ကူး စက်စေနိုင်သလဲ?
အစဦးးပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကလေးထိန်းတစ်ဦီးအားဌားရမ်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန်အချက်များစွာလိုအပ်သည်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ခြင်းအပြင် ကလေးအားပြုစုစောင့်ရှောက်မှု့နှင့်ပက်သက်၍ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်မှု့ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှု့များမှတစ်ဆင့် ကလေးများအတွက်လိုအပ်သော ပြုစုစော့ရှောက်မှု့ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု့အပိုင်းတို့ကိုလည်း ကြည့်ရှု့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြုစုပျိုးထောင်ရန်၊ အဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့်နားလည်မှု့ ၊ရှေးဦးသူနာပြုစုမှု့၊နာမကျန်းဖြစ်ချိန်အတွင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု့၊ ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ရာတွင် ကလေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနားလည်မှု့နှင့် ကလေးထိန်းသူကိုယ်တိုင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု့တို့ဖြစ်ပါသည်။
Intouch Medicareဆေးခန်းမှ ကလေးငယ်ထိန်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ ပရိုဂရမ်အား နှစ် ခုခွဲထားပြီးလျှင် စစ်ဆေးရမည့်အချက်အမျိုးမျိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကလေးထိန်းအလုပ်မ၀င်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု (ပရိုဂရမ် 1)
ဆရာ၀န်နှင့်တွေ့၍ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း/ Physical Examination
ရောဂါ ၅ မျိုးဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်/ Medical Certificate
မူးယစ်ဆေး၀ါးရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း/ Urine Met, Amphetamine
အဆုပ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း/ Chest X-Ray
အိပ်ချ်အိုင်ဗီပိုးစစ်ဆေးခြင်း/ Anti HIV
ကလေးထိန်းအလုပ်မ၀င်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု (ပရိုဂရမ် 2)
အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ် အေ ပိုးစစ်ဆေးခြင်း/ HAV Igm
အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ် ဘီ ပိုးစစ်ဆေးခြင်း/ HBsAg
ဓာတ်ခွဲခန်း၌ပိုးမွေး၍၀မ်းစစ်ခြင်း/ Stool C/S
အလုပ်မစတင်မီ ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့များသည် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသည်ဟုယူဆပါသည်။အဖေအမေ (မိဘ) များ၏စိတ်အေးချမ်းသာမှု့နှင့် ကလေးငယ်၏အန္တရာယ်ဘေးကင်းမှု့လည်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကလေးထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ပရိုဂရမ်အား စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သင့်အနီးနားရှိ အင်ထပ်မီဒယ်ခဲ Intouch Medicare ဆေးခန်းသို့လာရောက်စစ်ဆေးရန် သင့်ကလေးထိန်းအား ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏အနီးနားရှိ ဆေးခန်းများအား Google တွင်ရိုက်၍ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (သို့) ကျွန်ပ်တို့၏ ဝက် (ဘ်) ဆိုက် Website ရှိဆက်သွယ်မှု့လမ်းကြောင်းများမှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ก่อนเริ่มงาน พี่เลี้ยงเด็ก nanny ใกล้ฉัน အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း အလုပ်မစတင်မီ ကလေးထိန်း nanny သင်နှင့်နီးသော CHK-NANNY